Abesilisa Abadala kanye Nomuthi Wezinduna | Amadoda aSitayela
Izinduna zivame ukuhlotshaniswa nobusha kuphela, kodwa amadoda amaningi asekhulile aqhubeka nokulwa nawo okusanhlamvu emhlane nezinye izitho zomzimba ezingamashumi amabili, amashumi amathathu kanye nangemva kweminyaka engama-40. Kulinganiselwa ukuthi zimelela cishe ama-25%.
Kunezimbangela ezintathu zomqubuko: izindlala ze-sebaceous ezisebenza ngokweqile, izintambo zezinwele ezixhunyiwe (amaseli afile, i-sebum), nokuba khona kwamagciwane ku-follicle uqobo. Kunengqondo-ke ukuthi lokho ochwepheshe abakushoyo lokho ukwelapha izinduna kufanele ufunde ukuphatha kangcono ukukhiqizwa kwesikhumba semvelo yesikhumba.
Uma unezinduna, kunesilingo sokugeza ubuso bakho ngensipho eqine kakhulu emakethe, ukuze isisize sisuse yonke i-sebum. Kodwa-ke, lokhu kuzokwenza ukuthi isikhumba siqale ukukhiqiza i-sebum eningi yokwenza ukulahleka. Esikhundleni salokho, ukubheja umkhiqizo onefomula emnene engacasuli isikhumba sakho futhi uyisebenzise kabili ngosuku ukugeza ubuso bakho.
Ukuqhuma izinduna kwesinye isikhathi kuyasebenzaKepha kuvame ukuvumela ubovu namagciwane ukuthi asabalalele kuzicubu ezizungezile, lapho kungadala khona izinduna eziningi. Ukungakhulumi ngezibazi ezingashiywa uma induna ingeyosayizi omkhulu. Ngakho-ke zama ukugcina iminwe yakho isuke ebusweni bakho bese inqubo iqhubeka.
Amafutha esihlahla setiye
Ukwelashwa ngamabala kungasebenza kakhulu uma zisezingeni futhi zisetshenziswe kahle. Qinisekisa ukuthi aqukethe i-benzoyl peroxide, isithako esiyisimangaliso uma kukhulunywa ngokugcina izinduna zilawulwa. Ezinye izithako okufanele uzicabangele yi-salicylic acid kanye namafutha esihlahla setiye, angathengwa ngawodwana (ungawabona kule migqa). Futhi khumbula: ungacabangi ukuthi ngeke ukwazi ukwenza ngaphandle komkhiqizo okukhulunywa ngawo. Isihluthulelo ukusebenzisa okuncane nokuncane esikhathini esingamasonto amabili uze ususe ngokuphelele esimisweni sakho sokuzilungisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Amathiphu wokushaya induna lapho usumdala
Izizathu ezintathu zokuvalelisa ezindevu ezinde ngo-2016